トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ umdla ngokubanzi ngetyala esijikelezayo (umsebenzi) kunye namazinga enzala
Esijikelezayo umdla credit kwakhona ingqinelana nomdla ngexesha ukulondoloza. Kuyinto eqhelekileyo ukuba babale imihla usebenzise imali ukususela ngomhla olandela umhla wokuvala kwekhadi de kwinyanga elandelayo umhla wokufumana imivuzo, imali oyityalayo oko kukuthi, kwisithuba olujikelezayo umdla ngetyala. Kule izinga ikhomishini ukusebenzisa imali eseleyo, isixa semali liphindaphindwe iintsuku 30 imali ebalwe kwi per diem of iintsuku ezingama-365, uya kuba nomdla yenyanga. Iinkampani ezininzi ikhadi zibalwe inzala olujikelezayo ngetyala ngale ndlela. Izinga
kunyakamali ka-15% kulo ixabiso lemarike
rate ikhomishini lwangoku, kodwa kude kube kwisiqingatha sesibini 2000 yaba ahlukeneyo sobunyani ikhadi nganye, ngoku sele waba icala elingenzi nto-by-icala kunye zinga real yi-15% . Yintoni ubizwa ngokuba kwiNkulumbuso khadi kunye Gold card, nto leyo ukwandisa intlawulo yonyaka sele izicwangciso ezisezantsi, njenge-11% okanye 13%. Ngenxa
15% yeyona umyinge wenzala wenzala tirhisiwaka likarhulumente eyayishiyeke ukuboleka imali kunyaka omnye. Ukuthenga izinto 10,000 yen, izinga ikhomishini isicelo ngelo xesha, ukuba ahlawule isixa semali emva konyaka omnye uya kuba ka-15%. Xa ahlawulwa emva kweenyanga ezintandathu, 7.5% of isiqingatha-15% iya kuba umlinganiselo ikhomishini. Uze kubalo, ngenyanga nganye, izinga lenzala iya kuba kukuba 1.25%.
ukuthenga 10,000 iimpahla yen kwi-15% ye-credit olujikelezayo, bababuyekezele emva kwenyanga 1, 1 ukuya 10,000 yen. 125 yen liphindaphindwe ekhulwini 25 uba nomdla, imali wokufumana imivuzo uya kuba 10.125 yen. ukuhlawula kuphela yen 125 umdla, kukuba uze ungamniki 10,000 yen yemali. credit esijikelezayo kuthiwa indlela yokubhatala kakhulu lula kakhulu ingqiqo lisithi.
njenge umhla indlela yokubhatala ikhomishini calculation umzekelo
ngenyanga iintsuku ezili-10, ukuba ubhalisela credit olujikelezayo kwi yen 10,000, umzekelo, unalo lwezinto 30,000 yen ngoJulayi 15. rate yonyaka ibalwa kwi-15%, ngo Agasti iintsuku ezili-10 emva komhla wentlawulo yokuqala, engaphezu kwe-15% ukuya yen-30,000, iphindwe ezingama-26 ukuba imali umahlule ngo iintsuku ezingama-365 yaye uya kuba yen 320, 10,000 320 yen uya kuhlawula.
Inqununu liye lancipha ukuya 20,000 yen. Ngenyanga elandelayo kaSeptemba 10, lahlulwe ngazo iintsuku 365 iphinda yi-15% ukuya 20,000 yen, uya kuhlawula 10,000 254 yen 'dibanisa 254 inzala yen liphindaphindwe iintsuku 31. Ngokufanayo, xa ukubala ixesha wesithathu, kuya kuba 10.123 yen. Intlawulo iyonke 30,000 697 yen, inzala iya kuba 697 yen.
I-credit olujikelezayo ujongene kukuthi, amakhulu amawaka yen okanye ngaphezu koko itikiti omkhulu-, kunjalo ukuba ufuna ukuthenga ligcinwe amashumi amawaka yen intlawulo leyo. Kule meko, libya umdla card rate lamatyala kuthiwa kuluncedo. Ukuba intlawulo yonyaka yen 10,000 okanye ngaphezulu kwikhadi leNkulumbuso, intlawulo yonyaka ziya, kodwa amazinga enzala ezazifihliwe ephantsi. Malunga ne-11% yeyona zonyaka ngomyinge wenzala we ikhadi Premier eqhelekileyo.
eyeleleneyo | ubalo indlela ngetyala esijikelezayo, ikhadi Ukulinganisa
ngonyaka imali ukuze zibe nokuba imali encinane inzala yen 10,000, izinga ukuncitshiswa iingongoma-1% 1. Uye waba 25 ekhulwini, nabo bafumana indawo enkulu kwakunjalo xa uthenge izinto itikiti inkulu, unako ukunceda ukuthenga elandelayo. nabanye abaninzi kwakhona inkonzo ezingalindelekanga ezamahala intlawulo, kanye ukusuka ngetyala olujikelezayo, kunye nemali ezinamatheleneyo nokuyibuyisa kwangoko xa ungena isandla emva koko, oku kuya kongela inzala.
izinto kungekuphela nje kwinyanga ezayo esisixa-mali yokuhlawula lokuthenga yinto enzima ukuyisebenzisa ngokulula. Okanye ezinkulu ukubeka iintlawulo zenyanga, kukusetyenziswa indlela nobuchule yombane xa usecicini.